Rant: Urhulumente wase-US uya kutshabalalisa urhwebo nge-Intanethi | Martech Zone
Rant: Urhulumente wase-US uya kutshabalalisa urhwebo lwe-Intanethi
NgoLwesibini, Matshi 26, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Uqoqosho lusengxakini eUnited States. Ngokusetyenziswa kwerekhodi, umsantsa wobutyebi uyaqhubeka ukwanda, indlala iyenyuka, inani labemi abaxhomekeke kukungabikho kwemisebenzi, izitampu zokutya, ukukhubazeka okanye intlalontle ikumanqanaba eerekhodi. Linye kuphela icandelo loqoqosho lwaseMelika elichumayo- elinemisebenzi ehlawulwa kakuhle, imisebenzi emininzi evulekileyo, iitoni zenkxaso mali, kunye nokukhula kwentengiso. Eli candelo linjalo i-intanethi.
Ngabathengisi beebhokisi ezinkulu abasokolayo kunye norhulumente Ukuchitha imali kwizifundo zedadaIkamva le-ecommerce boom likhangeleka limfiliba njengeNdlu yeeNgwevu Ndivume nje umthetho oyilwayo kwirhafu yokuthengisa ye-Intanethi. Ke… isahlulo esinye soqoqosho esingasokolayo ngoku siza kuthi ekugqibeleni sijoyine yonke enye indawo yoqoqosho esele ikho wancedwa ngurhulumente womanyano.
Ukuba lo mthetho uyilwayo upasisiwe, sisiqalo sokuphela kokuchuma kwenkqubo yethu yentengiso yasimahla ye-Intanethi esinike yona kule minyaka ingama-20 idlulileyo. Abathengisi abakhulu beebhokisi zeebhiliyoni abanabanini, abaphetheyo nabalawula amaxabiso kunye nokuhanjiswa kweempahla kunye neenkonzo ngoku baphulukana nokubambelela kwabo kwi-Intanethi… kwaye bayakhala. Bakhokele phambili ngokucinezela iinkokheli zethu ukuba zirhafele i-Intanethi.
Wonke umntu uvulelekile ukukhuphisana kwi-Intanethi
Bamele babe neentloni. Cinga ngayo… ayisiyonto ngaphandle kwendawo yokuhambisa eyongeza ngaphezulu kwexabiso lempahla ngaphambi kokuba sizifumane. Ndiqinisekile ukuba ujonge emva kwimbali abathengisi bakhala ngokungalunganga xa Ikhathalogu yeeSears yenza indlela yayo kwiminyango yabathengi kwaye ngoku banokufikelela kwiimveliso ezifikelelekayo kunye neempahla ngeposi ethe ngqo. Wonke umthengisi omkhulu weebhokisi wayenemali kunye nethuba lokutshintsha ishishini lakhe aye kwi-Intanethi. Ukuba bayasilela ukwenza njalo, baya kujongana neziphumo.
Iinkampani zaseKhaya kufuneka zihlawule iRhafu yaseKhaya
Ukuba nomthengisi omkhulu weebhokisi yongeza inkcitho kuluntu lwasekhaya - ukusuka kwiindleko zothutho, iindleko zendlela, amapolisa nezonyango, ukuya kwiindleko zoncedo… kuquka amanzi, umbane kunye nokulahlwa kwenkunkuma. Iirhafu zikarhulumente nezasekhaya zithengisa ezo ndleko kwingingqi yengingqi. Yinkqubo enengqiqo. Ukuba ndithenga nge-Intanethi, kuxabisa indawo endihlala kuyo. Ezothutho zihlawulelwa yinkampani yokuhambisa kunye nerhafu yepetroli. Akukho sidingo seerobhothi, akukho kubanjwa kubanjwa ezivenkileni, akukho kulahlwa kwenkunkuma, akukho sidingo soncedo olongezelelweyo… nada.
Abathengisi abaphulukani neShishini ngenxa yeRhafu yaseKhaya
Pha are Izibonelelo zokuthenga kumthengisi wasekhaya… Ndiyakwazi ukuqhuba ndigoduke nempahla, ndingazama impahla, ndingazifumana zifakela izixhobo, ndingafumana inkxaso yemveliso kuzo, okanye ndingatshintshisa ngentengo ngaphandle kokulibazisa. Ndihlala ndithenga kumthengisi wasekhaya- kodwa kuncinci kunakuqala. I-Intanethi iye yalungela ngakumbi. Andithengi kwi-Intanethi kuba andihlawuli rhafu khona… Ndithenga kwi-Intanethi kuba ndingayenza kwifowuni yam kwimizuzu nje embalwa. Akukho kuqhuba, akukho kupaka, akukho kulinda emgceni, akukho kukhangela kwimigca engapheliyo yeemveliso, akukho bantu banikezela ngenkonzo yabathengi, okanye abo batyhalayo, okanye abangathandiyo, okanye akukho ncedo kwaphela.
Ukuvula iBhokisi yePandora yeRhafu yaseKhaya
Uluhlu lwerhafu luluhlu ngaphezulu Imimandla yerhafu yokuthengisa eyi-9,600. Khawufane ucinge ukuba yonke indawo ye-ecommerce ngoku kufuneka icwangcise ukuya kuma-9,600 eerhafu ezahlukeneyo zasekhaya ezihlala zitshintsha. Zonke izicelo zeselfowuni zifuna ukwakhiwa kwakhona kwinkqubo kwi-9,600 yemithetho yerhafu eyahlukeneyo. Ababoneleli be-ecommerce baya kudinga ukufayilisha irhafu yonke indawo Benza ishishini kwi. Ngamandongomane.
Irhafu yangaphakathi iya kubulala ubuShishini
Yithi ndlela-ntle kuwo onke amashishini amancinci kwiwebhu angakwaziyo ukufikelela kwintloko ehambelana nezi ndleko. Ngokuqinisekileyo ... izisombululo ezitsha ziya kuguquka, amashishini amatsha alawula ukufakwa kweerhafu kuwe. Kodwa iindleko ziya kongezwa kuyo yonke imveliso oyithengayo-ukongeza kwirhafu entsha yokuthengisa. Indawo zorhwebo ezishiyekileyo kuphela iya kuba ngamakhwenkwe amakhulu anokukwazi ukufumana iindleko kwaye aqale le ngxaki kwindawo yokuqala. Amashishini amancinci kunye noosomashishini abatyhafile.
Ngaba oku kuyakwenza ibala lokudlala enobulungisa phakathi kwabathengisi kunye ne-ecommerce? Akukho nto ilungileyo ngayo. Icandelo lokugqibela loqoqosho lwaseMelika olukhulayo ngoku liza kujoyina wonke umntu ekubanjweni, ukungabikho kotyalo-mali, kunye nokuphuma kwintengiso yeshishini. Kunye nabathengisi beebhokisi ezinkulu ababesele beya kwicala elo.
tags: eCommerceintanethiirhafu yentengiso ye-intanethiirhafu ye-intanethiIrhafu yentengiso yendawo
Ukunyanzelwa: Inguqulelo Yonke into
Epreli 22, 2013 ngo-6: 04 PM
Ndicinga ukuba kufuneka siqalise ukurhafisa i-imeyile ukuze "ilungile" kwi-ofisi yeposi.